निषेधाज्ञा खुलेसँगै यी कारणले बढ्दैछ कोरोना संक्रमण – Satyapati
निषेधाज्ञा खुलेसँगै यी कारणले बढ्दैछ कोरोना संक्रमण
काठमाडौं । निषेधाज्ञा खुलेसँगै कोरोना भाइरस संक्रमणको ग्राफ पनि उकालो लागको छ ।
मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले साउन लागेपछि मानिसको आउजाउ बढेपछि संक्रमणदर पनि बढिरहेको बताए ।
निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै जनस्वास्थ्यमा मापदण्ड लागू गर्न, भीडभाड नगर्न र सामाजिक दूरी दुई मिटर कायम गर्न पटक–पटक आग्रह गरे पनि मानिसले लत्याएका छन् । यसबाट संक्रमण दर क्रमशः बढ्दै गएको पाइएको छ ।
संक्रमणको दोस्रो लहर आएसँगै दैनिक १ हजार ८०० मा झरे पनि अहिले त्यो क्रमशः बढ्दै गइरहेको छ । अहिले त्यो संख्या बढेर ३ हजार पुगेको छ ।
साउन १ गते १४ हजार १८२ जनाको परीक्षण गर्दा २ हजार ९३६ मा संक्रमण देखिएकामा बिहीवार साउन ७ गतेसम्म आइपुग्दा २ हजार ७१४ पुगेका छन् ।
मन्त्रालयका अनुसार मृत्यु हुने संख्या १८ सम्ममा झरे पनि बिहीवार २४ जनाको संक्रमणबाट निधन भएको छ । यसैगरी सबभन्दा बढी संक्रमणदर हुने प्रदेशमा प्रदेश नम्बर १, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम रहेका छन् ।
ती प्रदेशमा परीक्षण गरिएकामध्ये २ जनामा १ जना संक्रमित पुष्टि भएको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. अधिकारीले बताए ।
जनस्वास्थ्यविद् डा. सागरराज भण्डारीले निषेधाज्ञा खुकुलो पारेसँगै जोखिम बढेको बताउँछन् । उनले परीक्षणको दायरा कम र खुकुलो भएसँगै मानिसको भीडभाड भएकाले नेपालमा संक्रमणको जोखिममा अझै रहेको बताए ।
‘मानिस घरमै बसेर संक्रमणलाई लुकाइरहेका छन् । संक्रमण भए पनि आइसोलेसनमा बसेका छैनन्,’ उनले भने, ‘जसले गर्दा घरपिच्छै सबै मानिसमा संक्रमण हुने डर छ ।’
शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका निर्देशक डा. अनुप बाँस्तोलाले खुकुलो भएसँगै मानिसले जनस्वास्थ्यमा मापदण्ड प्रयोग नगर्दा जोखिम रहेको बताउँछन् ।
‘खोपले लगाएको ४ देखि ६ हप्तासम्म काम गर्दछ,’ उनले भने, ‘खोप लगाएकाले पनि स्वास्थ्यमा मापदण्ड लागू नगर्दा त्यो बीचमा जोखिम नै हुन्छ ।’
सरकारले तेस्रो लहर आउनसक्ने चेतावनी दिइसकेको छ । नेपालमा असोज वा कात्तिक महिनातिर तेस्रो लहर आउनसक्ने बताइएको छ ।
अस्पतालका निर्देशक डा बाँस्तोलाले तेस्रो लहरका रूपमा डेल्टा प्लस भेरियन्ट नेपालमा देखिइसकेकाले जोखिम शुरू भइसकेको बताए । उनले डेल्टा प्लस भेरियन्ट निकै संक्रामक रहेकाले बच्नुपर्ने बताए ।
उनले तेस्रो लहर आएर भयाभह स्थिति नआओस् भन्नका लागि सबै स्वास्थ्य संस्थालाई तयारी अवस्थामा राख्न अनुरोध गरिएको बताए ।
‘सबै अस्पताललाई अक्सिजन भर्न र श्यया तयारी अवस्थामा राख्न निर्देशन दिएका छौं,’ उनले भने, ‘तेस्रो लहरले बालबालिकालाई बढी प्रभाव पार्ने भएकाले बालबालिकाका लागि सघन उपचार कक्ष र भेन्टिलेटर तयारी अवस्थामा राख्न भनेको छौं ।’
संक्रमणमुक्त हुनेको संख्या ६ लाख ३७ हजार ६९० पुगेको छ । संक्रमणबाट हालसम्म ९ हजार ६६१ जनाको निधन भइसकेको छ ।
पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री नवाज सरिफले आजीवन निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने
मन्त्री बन्दै अधिवक्ता गोविन्द बन्दी !